खेलकुद – Khabaarpati
October 14, 2021 adminLeaveaComment on २० वर्षपछि हारको ब’दला लियो नेपालले, मैदानमै ध’रधरी रोए बंगलादेशी खेलाडी
दक्षिण एसियाली फुटबल(साफ)मा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै नेपाल पहिलोपल्ट फाइनलमा पुगेको हो। माल्दिभ्सको मालेस्थित नेशनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल पहिलो हाफमै पछि परेको थियो। बगंलादेशले खेलको आठौं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। बंगलादेशका सुमन रेजाले हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको ८८ औँ […]
October 13, 2021 adminLeaveaComment on अन्जान बिष्टको गोलले नेपाल फाइनलमा पुग्यो, अहिलेसम्मकै इतिहास रच्यो
काठमाडौ । माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनलमा पुगेको छ । लिग चरणको नेपालको अन्तिम खेलमा अन्जान बिष्टले पेनाल्टीबाट गोल गरेर बंगलादेशसँग बराबरी खेल्दै टोलीले देशलाई फाइनलमा पुर्याएका हो । यो इतिहासकै पहिलो हो । नेपाललाई इतिहास रच्न भाग्यले साथ दिएको थियो । बंगलादेश १० खेलाडीमा समेटिन बाध्य भयो । बंगलादेशका गोलकिपर अनीसुर रहमान ज़िकोले […]
प्रशिक्षकले तिमीले गोल गर्छौं भनेर विश्वास गरेर मैदान पठाउनु भएको थियो : मनिष डाँगी
October 2, 2021 adminLeaveaComment on प्रशिक्षकले तिमीले गोल गर्छौं भनेर विश्वास गरेर मैदान पठाउनु भएको थियो : मनिष डाँगी
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड मनिष डाँगीले प्रशिक्षकको योजना अनुसार नै आफुहरुले खेलेको र माल्दिभ्सविरुद्ध जित निकाल्न सफल भएको बताएका छन् । साफ च्याम्पियनसिप २०२१ अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न पहिलो खेलमा आयोजक माल्दिभ्सविरुद्ध १-० गोलको जित हात पारेसँगै खेलको निर्णायक बनेका डाँगीले पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक अल्मुताइरीप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले भने, ‘प्रशिक्षकले तिमीले गोल गर्छौं […]
फिफा २२ का शिर्ष १०० खेलाडी सार्वजनिक, मेस्सी शिर्ष स्थानमा, रोनल्डो कती नम्बरमा ?
September 19, 2021 adminLeaveaComment on फिफा २२ का शिर्ष १०० खेलाडी सार्वजनिक, मेस्सी शिर्ष स्थानमा, रोनल्डो कती नम्बरमा ?
प्रसिद्ध ई गेम फिफा २२ को शिर्ष स्थानमा रहेका १०० खेलाडीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । ई गेम फिफा २२ ले आफ्नो खेलमा सर्वाधिक रेटिङ्ग गरिएका १०० खेलाडीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।यस सुचिको शिर्ष स्थानमा अर्जेन्टीना र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का स्टार खेलाडी मेस्सी शिर्ष स्थानमा छन् । मेस्सी ९३ रेटिङ्ग अंक सहित […]
August 19, 2021 adminLeaveaComment on मेस्सीले आँसु पुछेको टिस्यु पेपरको मूल्य १० लाख डलर !
एजेन्सी। लियोनल मेस्सी बार्सिलोनाबाट बाहिरिनु एक भावनात्मक क्षण थियो। जब यी अर्जेन्टिनाका सुपरस्टार आफ्नो बिदाइ भाषण दिँदै थिए त्यो बेला उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् । मेस्सी पोडियमको छेउमा उभिएपछि बार्सिलोनाका खेलाडी र सञ्चारकर्मीहरुले ताली बजाए। डेढ मिनेट भन्दा बढी ताली बजेपछि ती खेलाडीले आँसु थाम्न सकेनन्। ३४ वर्षीय मेस्सीले आफ्नो क्यारियरको २१ वर्ष बिताएपछि त्यहाँबाट […]
August 19, 2021 adminLeaveaComment on पेरिसको यो होटलमा बसिरहेका छन् मेस्सी, एक रातको भाडा कति होला ?
एजेन्सी। अर्जेन्टिनाका दिग्गज फुटबलर लियोनेल मेस्सीले हालै पेरिसको सेन्ट जर्मेनसँग करार गरेका छन् । मेस्सीले बार्सिलोनाबाट हट्ने निर्णय गरे र अब उनलाई पीएसजीका लागि खेलेको देख्न सकिन्छ। मेस्सी आजकाल फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बसिरहेका छन् र परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् । रिपोर्टका अनुसार मेस्सी आफ्नी श्रीमती एन्टोनेला र तीन सन्तानसँग पेरिसको ले रोयल मोनसेउ होटलमा बसिरहेका […]
August 12, 2021 adminLeaveaComment on आमाको अस्पतालको बिल तिर्न ओलम्पिकको स्वर्ण पदक
हालै जापानमा सम्पन्न ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक बिजेता एकजना खेलाडीले आफूले अस्पतालमा रहेकि आमाको उपचारको बिल तिर्नका लागि क’ठोर मेहनत गर्नु परेको बताएकि छिन। चीनका क्यान होङचान भर्खरै १४ वर्षका छिन। उनले सडक दु’र्घटनामा सक्त घाईते भई उपचार गराईरहेकि आमाको अस्पतालको बिल तिर्न क’डा प्रशिक्षण गरेको बताईन। उनकि आमा साधारण कामदार हुन। सडक दु’र्घटना पछि उनि […]
चार बर्षपछि मेस्सी र नेइमारको भेट, भावुक हुँदै मेस्सिको स्वागतमा नेईमारले यसो भने…
August 12, 2021 adminLeaveaComment on चार बर्षपछि मेस्सी र नेइमारको भेट, भावुक हुँदै मेस्सिको स्वागतमा नेईमारले यसो भने…
काठमाडौं : एक समय थियो, जतिबेला नेयमार मेस्सीको छायाबाट उम्किन चाहन्थे । उनले २०१७ मा त्यो निर्णय लिए । र, अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा फ्रेन्च क्लब पीएसजीमा आबद्ध भए । यो मेस्सीका लागि आश्चर्यचकित पार्ने समाचार थियो । तर नेयमार मेस्सीविना पीएसजीमा खुशी रहन सकेनन् । लुइस स्वारेज र मेस्सीसँग मिलेर सन् २०१५ मा ला लिगा, […]
फ्यान चकित ! मेसिले १० नम्बर जर्शी छोडेर ३० नम्बर रोज्नुको कारण यस्तो
August 12, 2021 adminLeaveaComment on फ्यान चकित ! मेसिले १० नम्बर जर्शी छोडेर ३० नम्बर रोज्नुको कारण यस्तो
एजेन्सी । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियाेनेल मेस्सीलाई सार्वजनिक गरेको छ । पीएसजीले बुधबार मेस्सीलाई सार्वजनिक गरेको हो । २ दशक बढी बार्सिलोनामा बिताएका मेस्सीले गत आइतबार क्याप नाउबाट विदा भएका थिए । मेस्सीले मंगलबार पिएसजीसँग औपचारिक रुपमा सम्झौता गरेका हुन् । पीएसजीमा मेस्सीले ३० नम्बर जर्सी प्रयोग गर्नेछन् । आफूले २१ वर्ष […]
August 11, 2021 adminLeaveaComment on बधाई ! किर्तिमानी रकममा मेसि पिएसजीमा अनुबन्ध, पारिश्रमिक थाह पाउँदा दुनियाँ चकित
काठमाडौं : बार्सिलोनाबाट हालै विदा भएका अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी फेन्च क्बल पिएसजीमा आवद्ध भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले मेस्सी २ वर्षका लागि पीएसजीमा रहनेगरी सम्झौता भइसकेको दाबी गरेका छन्। द स्काई स्पोर्ट्सका अनुसार मेस्सीले पिएसजीसँग २ वर्षको सम्झौता गर्नेछन् त्यसमा १ वर्ष सम्झौता लम्बाउन सकिने विकल्प पनि रहेको छ । पिएसजीले मेस्सीलाई वार्षिक २५ मिलयन […]